ရည်ရွယ်ချက် နဲ့ Background
About SLD Education (SLD ပညာရေးအကြောင်း)
SLD ကို 2018 May လမှာ စတင် ထူထောင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပါတယ်။ လူငယ်များ English စာကို communication အတွက်ကော၊ Academic Skills အတွက်ပါပိုင်နိုင်စွာတက်မြှောက်ပြီး အဆင့် မြင့် ပညာရေး‌သို့ လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်၊ လူငယ်များ ကုန်ကြစရိတ် အနည်းဆုံး နဲ့ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ တဲ့ပညာရေး ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ရင်းနှီးပေးစေလို တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ Academic English skills and competencies to excel ataglobally competitive work and education environments. Soon, SLD extended the services to companies in training their staff with the practical English skills necessary for carrying out their responsibilities effectively. After Covid pandemic hit Myanmar, SLD started offering classes for Teens and Children to help them continue learning for their future lives.
SLDကျောင်းကို အနာဂတ်အလုပ်အကိုင် နှင့် ပြည်ပတွင် အဆင့်မြင့်ပညာ လေ့လာမှု များအတွက် ပြင်ဆင်နေကြသောကျောင်းသူ/သားများကို မမ္ဘာနဲ့အမှီ ရင်ဘောင်တန်း လိုက်နိုင်ဖို့ လိုအပ်သော Academic English နှင့် Competencies များကို ဖြည့်စွပ် ကူညီပေးနိုင်ရန် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် SLD သည် နိုင်ငံတကာနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရပ်တည်လာရတဲ့ ကုမ္ပဏီများအတွက် ဝန်းထမ်းများမှာ လိုအပ်သော မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော English Skills များကိုပါ ၀န်ဆောင်မှုများစပေးခဲ့ပါသည်။ ကိုဗစ်လှိုင်း ဝင်လာတဲ့အချိန်ကစပြီး ကလေးများအတွက် ဆက်လက်ပညာသင်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ English for Youngstersကို စတင် ဝန်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။
SLD Vision-Mission Statement (SLD၏ရပ်တည်ချက်)
Asalanguage school, SLD seeks to contribute in the country’s goal to rebuild the education system by training young students, especially those are preparing for higher education to be future leaders, with strong academic English foundations and skills.
SLD aims to contribute to the developmental goals of the nation by helping young professions with English skills that they need to be more efficient and successful in their chosen fields.
SLD aims to enable young people to be critical thinkers who would uphold not just intellectual virtues, but also humanistic and moral values.
ဘာသာစကား သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ လက်ရှိတည်နေသည်ဖြစ်ပေမဲ့ SLDသည် နိုင်ငံ၏ ပညာရေးစနစ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာ တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အမြဲပါဝင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားသွားပါမည်။ လက်လှမ်းမှီသလောက် အဆင့်မြင့် ပညာဆည်းပူးရန်ပြင်ဆင်နေသော လူငယ်များ လိုအပ်သည့် တက္ကသိုလ်အဆင့် ကျောင်းသုံး English စာ (Academic English) ကို စနစ်တကျနဲ့ သင်ကြားပို့ချပေးနေပါသည်။
SLD သည် နိုင်ငံ၏တိုးတက်မှုအတွက်လည်း တဖက်တလမ်းမှ အမြဲ ပါဝင်နိုင်ဖို့ အတွက်လည်း ကြိုးစားသွားမည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိမှာ အလုပ်ခွင်အတွက် ပြင်ဆင်နေသောသူများကို အောင်မြင်ပေါက်မြောက်နိုင်ဖို့ လိုအပ်သော ကအင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အခြေခံအုတ်မြစ်များ ကို သင်ကြားပို့ချပါသည်။
SLD သည် တိုင်းပြည်အတွက်အဖိုးတန် အရင်းအမြစ်များဖြစ်လာမည့် ကျောင်းသားများအတွက် အမှန်အမှားခွဲဝေတတ်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သော ဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်နိုင်ခြင်း၊ အကျင့်စာရိတ္တ နှင့် လူတန်ဖို့များသိရှိနိုင်ခြင်း၊ တရားမျှတခြင်းစသည့်တန်ဖိုးများ သိရှိဝေခွဲတတ်နိုင်သော ပညာများကိုလည်း လက်လှမ်းမှီလောက် အမြဲဖြည့်ဆည်းပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
Our Approach to Learning (သင်ကြားနည်း)
SLD upholds the motto of “Forging Lifelong Excellence”.
To be excellent at something, all humans need to practice again and again like forging gold. Hard work, proper coaching and guides, andalot of repetitions are necessary to bring out the best in everyone.
In SLD, curriculums and learning approaches are carefully designed to help students optimize their learning outcomes. The teaching approaches in SLD are very interactive and intellectually challenging, so students will have no time to feel bored. The curriculum also includes the up-to-date general topics and questions that kindle both students’ interests and critical and analytical thinking skills.
SLD assess and measure the holistic growth of students: the progress of students is measured class participation, day to day assignment completion, exams, etc. Students usealot of modern tools to do their assignments.
About the founders (တည်ထောင်သူများအကြောင်း)
The founders are Nway Nway Zaw Min (MA Education, Xavier University, Philippines) and Tr. Francis Ling (MA School Management, AB Philosophy, Ateneo de Manila University, Philippines). They have been passionately working in the education sectors for more than 15 years because they fully understand about the power of education. They also know about the country’s education system well and the skills the young people lack to be competent in their studies and work at international level. In addition, they are great at customizing the courses they teach to meet the real needs of students in Myanmar setting.
တည်ထောင်သူများမှာ Nway Nway Nway Zaw Min (MA Education, Xavier University, Philippines) နှင့် Francis Ling Khui Shing (MA School Management, AB Philosophy, Ateneo de Manila University, Philippines) တို့ဖြစ်သည်။ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံး trainingများ တက်ခဲ့ရင်း ပညာရေးနယ်ပယ်တွင် ၁၅ နှစ်ကျော် အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည် ပညာရေးဖက်မှာ စိတ်အားထက်သန်သူတွေဖြစ်ပြီး၊ ပညာရေး၏ ပြောင်းလဲမှုတွေပေးနိုင်တဲ့ စွမ်းအင်တွေကို နားလည်သူတွေလည်းဖြစ်ပါသည်။
သူတို့က တိုင်းပြည်ရဲ့ပညာရေးစနစ်၏ အားနည်းအားသာချက်များကို ကောင်းကောင်း နားလည်သူများဖြစ်သည့်အလျောက် ဒီစနစ်ကလာတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသာတွေရဲ့ အားသာချက်ကိုသုံးခိုင်းပြီး အားနည်းချက်များကို ဖြည့်စွပ်ကူညီပေးနိုင်ရန် သင်ခန်းစာများကို ဖန်တီးသင်ကြားပေးသည့် အတွက် သင်ကြားမှုရဲ့ ထိရောက် ပေါက်မြောက်မှုတွေမှာ အများထက် အမြဲသာနေပါသည်။ ထို့ပြင် အလုပ်အတွက် ပြင်ဆင်နေသည့် ကျောင်းသူ/သားများ၊ ကုမ္ပဏီအသီးသီးမှ ၀န်ထမ်းများအတွက် လိုအပ်သော သင်ခန်းစာများကိုလည်း ဆွဲပြီး လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်သင်ကြားပေးပါသည်။
Why choose SLD? (SLDကို ဘာလို့ရွေးသင့်လဲ)
Join SLD Language Center if you are looking for passionate teachers who will understand you more, who will care for you sincerely, and who will put extra efforts to help you learn English efficiently. At SLD, the teachers with international qualifications understand the local education systems and the challenges of studying abroad or work environment very well, so they know the best ways to remedy the weaknesses you may have, foster essential skills you will need for academic or work challenges and forge excellence in you to be successful in your future. Our small-size classes ensure you to have full attention and help from the teachers that you will make the most of your time and resources. Moreover, by studying at SLD you will begin to appreciate “learning” as important as the air we need to breathe because it isaway of life that opens up our deeper understanding of the world around us and our own life. Also, you will continue to learn throughout your life because learning isacrucial endeavor for rebuilding the country’s education system andasure step for reforming the country for every aspect of life for the better. By joining SLD family, you will find friends who will never stop learning and sharing. If you areaforeigner, studying at SLD will help you learn not just English, but also understand Myanmar people and their culture from interacting with our kind local teachers and students from different corners of the country.